Nin Mareykan ah oo lagu eedeeyay in uu hub ku handaday dhalinyaro Soomaali ah - Halbeeg News
Minneapolis (HALBEEG)- Booliska gobolka Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa nin caddaan ah ku soo eedeeyay in koox dhallinyaro Soomaali ah uu ku handaday hub xilli ay ku sugnaayeen gudaha makhaayadda McDonald.
Ninka la tuhunsan yahay oo lagu magacaabo Lloyd Johnson ayaa lagu soo oogi doonaa dacwad fal dambiyeed ah marka uu ka soo hor muuqdo maxkamad aan ilaa iyo hadda aan la muddeynin xilliga ay dhaceyso.
Sida laga soo xigtay warbixinta ku lifaaqan dacwadda ka dhanka ah Johnson, labada gabdhood ayaa ku howlanaa bixinta kharashaadka cuntooyinkii ay iibsadeen iyaga oo adeegsanaya mid ka mid ah barnaamijyada casriga ah ee lagu bixiyo.
Johnson ayaa soo istaagay dhabarka dambe ee labada gabdhood dabadeedna wuxuu isku dayay in uu wax is daba marin ku sameeyo kaarkii ay lacagaha ku siteen oo ah kaar u muuqday in uu yahay midka dowladda ay ku caawiso dadka danyarta ah.
Mid kamid ah gabdhaha ayaa soo eegtay dhanka Johnson oo ku mashquulsanaa dhaq dhaqaaqooda waxuuna durbaba u duubtay feedh, waxaa isla markiiba usoo dhawaaday dhalinyaro kale oo Somali ah- Johnson markii uu indhaha ku dhuftay dhalinyarada Soomaalida ah ayuu dib u gurtay hubna ula soo baxay.
Ciidamada booliska ayaa dib u baaray dhaq dhaqaaqyadii ay duubeen kaamarooyinka ilaalada makhaayadda McDonald.
Dacwad oogaha ismaamulka Hennepin oo ka tirsan Minnesota ayaa Johnson ku eedeeyay in uu adeegsaday wadiiqa walba oo daan daansi ah taasoo keeni kartay isku dhac dhex mara isaga iyo dhalinyarada Soomaalida hase yeeshee nasiib wanaaga uusan dhicin fal waxyeello geysan kara.
xaafadda St. Paul ee magaalada Minneapolis waa mid ka mid ah xaafadaha ay daggan yihiin tirada ugu badan ee jaalliyadda Soomaalida ee dalka Mareykanka. Xaafadda Cedar-Riverside neighborhood ayaa loo yaqaanaa magaca “Muqdisha yareey”.